Sarkaal sare oo ka tirsan Qaramada Midoobay oo tegay Buulo Barde – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wafdi ka socda Qaramada Midoobay oo uu hoggaaminayo isku duwaha arrimaha bini’aadanimada ee Qaramada Midoobay, Philippe Lazzarini ayaa maanta gaaray degmada Buulo-burte ee gobolka Hiiraan.
Wafdiga ayaa u kuurgalaya xaaladda nolosha ee dadka halkaas ku nool, iyadoo degmadaas ay muddo go’doon ku hayeen Alshabaab.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan, Cabdifataax Xasan Afrax ayaa sheegay in wafdiga ay kala hadleen sidii loo gargaari lahaa dadka ku dhibaateysan degmada iyo nawaaxigeeda.
Wafdiga Qaramada Midoobay ayaa la kulmay mas’uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada, oo looga hadlayay sidii gargaar loo siin lahaa dadka ay abaarta saameysay.
Wafdiga Qaramada Midoobay ayaa isla maanta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho oo uu markii hore ka soo duulay.